Mazda sy Scooter nifandona : nifatratra tamin’ny fitaratra sady voahitsaka ilay mpitondra moto | NewsMada
Hatramin’ny ora nanoratanay, mbola miady amin’ny fahafatesana ny tovolahy iray nitondra moto, nifandona tamin’ny Mazda teny Andraharo omaly. Mafy ny fifandonana, nidona tamin’ny lohan’ny mazda, mbola notsenain’ny fiara hafa ilay tovolahy…
Samy nandeha mafy! Nifandona ny moto scooter iray sy fiara « minibus mazda » iray teny Andraharo manoloana ny toby fivarotan-tsolika Total, omaly maraina, tokony tamin’ny 8 ora. Miady amin’ny fahafatesana ilay lehilahy nitondra Scooter. Nifatratra teo amin’ny fitaratra anoloan’ny fiara Mazda ilay tovolahy. Nihosin-drà ny lohan’ilay fiara noho ny hamafin’ny fifandonana. Ilay moto kosa voahitsaka tao ambany tao.
“Hitanay nandeha mafy ilay fiara Mazda avy any Ankazomanga mitodi-doha ho any Ambohimanarina. Niala lavaka ilay fiara no nifanehitra tamin’ilay Scooter avy any Ambohimanarina. Tany amin’ny 20 metatra miala teo amin’ny toerana nifandonany vao tafajanona ilay fiara. Nipitika ilay lehilahy nitondra ny moto ka nidona mafy teo amin’ny lohan’ny fiara. Nipitika izy io ka mbola nodononin’ny fiara iray hafa avy aoriany indray”, hoy ny fitantaran’ireo olona nanatri-maso.
“Mbola miady amin’ny fahafatesana ilay tovolahy nitondra moto ary nalefa notsaboina haingana any amin’ny hopitaly Hjra. Mety ho nisy tapaka ny tanany sy ny tongony. Araka ny nolazaina taminay, niala lavaka ny fiara Mazda no nifanehitra tamin’ilay moto”, hoy ireo polisy nijery ny zava-nisy teny an-toerana.
Anisan’ny mahatonga ny loza eto amintsika ny fandehanana mafy na ho an’ny fiara io na moto. Ity farany anefa no anisan’ny mamono olona maro, indrindra ny tanora. Ny setrasetra ambony moto, sns, antony mahatonga izany. Eo ihany koa ny lalana ratsy lavadavaka mahatonga ny loza koa, toy ity nitranga teny Andraharo, omaly, ity.
Misy ny fepetra sy ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana eto amintsika, saingy vitsy ihany ny manaraka izany. Samy tompon’andraikitra amin’ny tenany ny tsirairay, ary samy mitandrina. Manana paikady mety ampihenana ny lozam-pifamoivoizana koa anefa ny mpitandro filaminana ary mametraka izany araka ny tokony ho izy. Na izany aza, sarotra ny misoroka ny loza mety hitranga.